Izindlela ezi-10 ezihamba phambili zeKissAnime.ru (100% Ukusebenza) - Ezokuzijabulisa
IKissAnime.ru ibingomunye wabanduleli bamawebhusayithi okusakaza kwi-inthanethi. Kwakuyinsizakalo ewusizo enomtapo wezincwadi omkhulu. Lezi zinsuku zimbalwa kakhulu izingosi ze-Anime zokusakaza ezitholakalayo. I-Kiss anime isanda kwehliswa. Kungenxa yokusetshenziswa okuqinile kwe-copyright yizinsizakalo zokusakaza.
Namuhla sizobheka izindlela ezingcono kakhulu zokusebenza. Ochwepheshe bethu bahlanganisa uhlu lwezinsizakalo zokusakaza ze-anime.
Lokhu kuzokusiza ukuthi ubuke imibukiso nama-movie wakho owathandayo. Sigxile kakhulu kumtapo wezincwadi nekhwalithi yokusakaza futhi. Ake sibheke ezinye zezinketho zethu eziphezulu ukuze siqhubeke.
Izindawo ezihamba phambili ze-KissAnime.ru:
UKissAnime ufike nomtapo wezincwadi omkhulu wemibukiso ethandwa kakhulu. Nawa amanye amawebhusayithi asakaza kakhulu esiwasebenzisela ukuzijabulisa kwethu. Sinezinsizakalo zokusakaza mahhala ezikhokhelwe kanye nezokusakaza.
INetflix iyisiteji sokusakaza esidumile esinelabhulali enkulu yezinhlelo ze-TV nama-Movie. Batshala imali kakhulu engxenyeni ye-Anime futhi. Lezi zinsuku abasebenzisi bangasakaza imibukiso yabo eyintandokazi yaseJapane ngokuchofoza okukodwa. Umtapo wolwazi ubulokhu wanda nsuku zonke. IJoJo's Bizarre Adventure, enye yemibukiso ye-hype ka-2020, iyatholakala lapha. Ungabuka futhi i-anime ekhethekile yeNetflix efana neDiabman Crybaby.
Ipulatifomu ihlola izethameli ezifundeni ezahlukahlukene. Emazweni amaningi, isitayela sobuciko saseJapan sithandwa kakhulu. Umehluko kuphela ukuthi iKissAnime yayikhululeke ngokuphelele. Abasebenzisi beNetflix kufanele bakhokhe inani elibhaliselwe ukujabulela ukuzijabulisa.
ICrunchyroll iyiwebhusayithi ephelele yokusakazwa kwe-anime kwi-inthanethi. Idume kakhulu ngenxa yomtapo wezincwadi ojwayelekile. Kunemibukiso eminingi evela kuzo zonke izinhlobo ezitholakala endaweni yesikhulumi. Abantu abaningi basebenzise izinsizakalo zabo isikhathi eside. Yisevisi ethembekile enesisekelo esihle somsebenzisi. Kuneziqephu ezingaphezu kuka-25,000 + ezitholakala emsamo. Okuqukethwe kwase-Asia esithangamini kuyamangaza.
Ungahlola ama-manga, umculo, nezinye izinto eziningi zamasiko. Uhlobo lwamahhala lwesayithi lusebenza ngosizo lwezikhangiso. Wonke umuntu ufuna ukuthola le sevisi ngenxa yokulayishwa kwayo okusheshayo. Abasebenzisi bangaqala ukusakaza kungakapheli amahora ambalwa ukusakazwa kwe-anime.
3. 9 Ama-Anime
9 Ama-Animes yiwebhusayithi eyenza abasebenzisi bakwazi ukusakaza okuqukethwe mahhala. Kuyindlela enhle kakhulu yabantu abathanda i-KissAnime. Abasebenzisi abaningi bajabulela ukusakazwa kwe-HD le webhusayithi okufanele ikunikeze. Sincoma ukuthi uthathe izinyathelo zokuqapha ze-VPN ezidingekayo. Umtapo wezincwadi okule webhusayithi ukhulu kakhulu, futhi banikela ngakho kokubili ama-subs nama-dubs. Ungahlola imibukiso ngosizo lwemenyu yohlobo.
Kunokwehlukana okuningi ngaphakathi kwewebhusayithi ukuze kube lula kuwe. Iqoqo elikule webhusayithi likhulu, lineziqephu ezingama-anime ezingaphezu kuka-26,000. Kulula ukuhlola imibukiso emisha ngale webhusayithi emnandi.
I-GoGo Anime inelabhulali enkulu enokufinyelela kuzidlali ezinhle zokusakaza. Ungasakaza kalula ngaphandle kwezinkinga. Iza ne-interface obabazekayo okulula ukuyihlola. Kuneziqephu zakamuva ezitholakala emsamo. Ungasakaza noma iyiphi i-anime oyithandayo ngekhwalithi ye-HD.
Abasebenzisi bangabheka imibukiso yabo abayithandayo ngaphandle kokubhaliselwe. Kumahhala ngokuphelele ukusebenzisa izindleko zawo wonke umuntu ohlola iwebhusayithi. Kunezinhlu nezinhlobo ezahlukahlukene kuwebhusayithi.Kade sizama le nkundla isikhathi eside. Isidlali sevidiyo futhi sikulungele ukusetshenziswa kwewebhu.
I-Anime freak ingenye yesikhulumi sokusakaza esinelabhulali enkulu ongayisakaza. Kuneziqephu eziningi zemfundo nezinsizakalo ezitholakalayo lapha. Ababukeli bangaqala ukubuka njengamanje ngaphandle kwenkinga nhlobo. Ine-interface efanayo yomsebenzisi kuwebhusayithi yeGoGo anime. Abasebenzisi bangabheka izinhlobo ezahlukahlukene zamaseva atholakalayo.
Awusoze waphelelwa ukuzijabulisa uma ukwazi ukufinyelela i-Anime Freak. Iwebhusayithi iyasebenziseka kakhulu. Zineziqephu ezingaphezu kuka-15000 zokusakazwa nsuku zonke. Abasebenzisi bangahlola nemibukiso ebukhoma.
I-Funimation ikhokhela ukusakaza insizakalo, okuya ngokuya kwanda kulezi zinsuku. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi ungakusakaza ngokusemthethweni okuqukethwe. Ababukeli abaningi emhlabeni jikelele batshala imali kule nsizakalo. Insiza yokusakaza ye-premium iphelele kuwo wonke ama-otakus. Ungahlola imibukiso neziqephu ezintsha nsuku zonke. Izindleko zokubhaliselwe zingabizi ngendlela exakile kubantu abaningi.
Inketho ye-premium plus iyatholakala ngama-dollar ambalwa njalo ngenyanga. I-Funimation okwamanje itholakala kuphela ezifundeni ezimbalwa emhlabeni jikelele. Umtapo wolwazi uhlala ukhula, futhi imibukiso emisha iyatholakala cishe nsuku zonke. I-interface yomsebenzisi nayo kulula ukuyithola.
7. Izulu Lama-Anime
Izulu le-Anime liphelele kulabo abathanda ukusakazwa kwamahhala. Ipulatifomu iza nenjini yokusesha ye-anime. Abasebenzisi bangaqala ngempumelelo ukusakaza ngaphakathi kwemizuzu embalwa. Ibuye ibe nomtapo wezincwadi omkhulu njenge-9 Anime ne-Anime Freak. I-interface yomsebenzisi ibaluleke kakhulu futhi kulula ukuyithola. Sincoma ababukeli bethu ukuthi bazame le ngxenyekazi ngenxa yokufinyelela okulula.
Isidlali sevidiyo siphuma ngekhwalithi ye-HD ngosizo lwamaseva asheshayo. Kuza nohlu lwemidlalo eqhubekayo ye-anime. Lokhu kufanelekile kubasebenzisi abafuna ukubheka imibukiso yakamuva emikhulu kunayo yonke i-japan okufanele inikele ngayo.
I-Just Dubs iyindawo engcono kakhulu yabasebenzisi abathanda i-English Anime. Ukubuka imibukiso yakho oyithandayo kungaba yinkinga ngoba mancane kakhulu amawebhusayithi eDub. Kule webhusayithi, sizobheka ukusebenza okuhle kakhulu. Abasolwa abajwayelekile benothi lokufa namanye amapulatifomu atholakala kalula ukuze uwasebenzise. Abasebenzisi bangahlola iziqephu zakamuva ze-dub ngokuchofoza okukodwa.
Ungazama futhi isidlali sevidiyo ngekhwalithi ye-HD. Sincoma ukuthi uyisebenzisele izidingo zakho zokusakaza. Ukuchofoza okukodwa nje futhi akudingi ubuchwepheshe obuningi. Isici sokuxoxa bukhoma senza abasebenzisi bakwazi ukuxhumana nabantu abahlukile.
I-Chia anime ithandwa kakhulu phakathi kwabantu. Kunabasebenzisi abaningi abazama insiza. I-interface yewebhusayithi iyasiza futhi. Noma ngubani angabhekabheka amathoni eziqephu ngokuchofoza okukodwa.
Kukhona ama-100s wamakhasi atholakalayo kuwebhusayithi.I-anime yeChia inelabhulali enkulu yezidingo zakho. Sincoma bonke abafundi bethu ukuthi bazame le nsizakalo.Ungasesha umbukiso wakho owuthandayo usebenzisa ibha yokusesha. Abasebenzisi futhi bangazama izici zokuhlola ukuzama imibukiso emisha.
10. Ukusakazwa kwe-Anime online
Ukusakazwa kwe-Anime kuza nesisekelo esikhulu somsebenzisi. Wonke umuntu angahlola izinketho zakhe ngale nkundla.Kade sisebenzisa izinsizakalo zayo isikhathi eside. I-interface iveza yonke imibukiso ngokuphelele. Kukhona igumbi lokuxoxa elibukhoma kuwebhusayithi, futhi.
Iqondile ngesidlali sevidiyo esihle. Abasebenzisi bangasakaza ngekhwalithi ye-HD besebenzisa le nkundla.Kuphelele mahhala ukubukela imibukiso yakho oyithandayo kule nkundla.
Kulo mhlahlandlela, sihlanganisa ezinye izindlela eziyishumi eziphezulu zeKissAnime.ru. Selokhu iwebhusayithi yehlisiwe, kunezinkinga eziningi zokuthola imibukiso yakamuva. Sithemba ukuthi ukukhetha kwethu okuphezulu kukusize ukuthi uqale ukusakaza kalula.
Ama-Anime amahle kakhulu ku-Hulu (2020)
Isivivinyo Samahhala se-ExpressVPN 2020 - Izinsuku ezingama-30 Sibuyele Imali (Kuqinisekisiwe)
bukela ama-movie we-megavideo yamahhala
Uhlelo lokusebenza lwe-bbc america fire tv
ama-movie wamahhala ongawabuka mahhala
ungasula kanjani izinhlelo zokusebenza ezingemuva ku-iphone
i-psn generator yekhadi lesipho lamahhala
isiguquli se-youtube ku-mp3 pc